Ku noolaanshaha Heerka 1 | Living at Level 1 | Unite against COVID-19
Heerarka Digniinta | The Alert Levels
Ku noolaanshaha Heerka 1 | Living at Level 1
COVID-19 weli wuu jiraa
Qof kasta oo jooga New Zealand waxa uu u baahan yahay:
inay dhaqaan oo qalajiyaan gacmahooda si joogto ah si ay u dilaan fayraska. Isticmaal saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 sikin. Si buuxda u qalaji.
Dabool qufaca iyo hindhisada, tusaale ahaan adoo ku qufacaya ama ku hindhisaya suxulkaaga.
Haddii aad qabto hargab ama astaamaha hargabka guriga joog, soo wac dhakhtarka ama Healthline oo talo ka hel ku saabsan in lagu baadho. Ha safrin, tag dugsiga ama tag shaqada.
Raad raac halka aad tagto iyo cida aad aragto. Isticmaal abka Raad raacaha NZ COVID, buug yaraha raad raacaha COVID-19, ama qoraalada qoran.
Talada ku saabsan in lagu baadjo
Talad aku saabsan raad raaca taabashada
Talada ku saabsan fayraska iyo astaamahiisa
Waji daboolka iyo Masgarooyinka
Maasgarooyinka iyo daboolada Wejiga waa waajib guudka gaadiidka dad waynaha New Zealand oo dhan xaga dhammaan heerarka Digniinta COVID-19 Isticmaalka maaskareetooyinka iyo daboolada wehiga sidoo kale waa la dhiirigeliyaa marka kala fogaanshaha jidhka uu adag yahay, sida subarmaarkadada ama dukaanada.
Riix halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan maskareetada iyo daboolada wejiga (external link)
Ma jiraan xayiraadaha isku imaanshaha. Kuwan waxaa kamid ah aaska, arooska, isku imaanshaha diimeed iyo bulsheed, ciyaaraha iyo raaxaysiga.
Digniinta Heerka 1, COVID-19 waa la xakameeyaa. Weli waa fikrad wanaagsan in loo jirsado fogaan badbaadado ah dadka aanad aqoon marka baxdo. Tani waxay caawin doontaa yaraynta faafida COVID-19 haddii xaaladuhu ay ka muuqdaan gudaha bulshadda.
Shaqada iyo ganacsiga
Ganacsiyada iyo goobaha shaqada waxay u hawl geli karaan si caadi ah. Waa inay muujiyaan Raad raacaha NZ COVID QR lambarkaoo bixiyaan nidaamyada raad raac axidhiidha dhisme kasta.
Safarka iyo gaadiidka
Gaadiidka dad waynaha waa inay muujiyaan lambarka QR oo ah xidhiidhka raad raaca.
Haddii aad jiran tahay soo wac dhakhtarkaaga ama Healthline wixii ah talada baadhida ka hor safarka. Guriga joog oo is baadh haddii la waydiiyo.
Dugsiyada, adeegyada barashada hore iyo waxbarashadda dugsiga sare ka dambaysa waxay u furmi kartaa si caadi ah. Waa badbaado in carruurta dugsiga loo diro.
Helida macluumaadka saxda ah
Wakhtiyad qaarkood macluumaadka si ula kac ah ayaa loo daabacaa si loo marin habaabiyo oo loo khiyaameeyo dadka. Tan waa nagu lid anaga wakhtiga marka aanu ubaahanahay inaan wada shaqayno si aan uga guulaysano fayraska.
Talada ku saabsan helida macluumaadka saxda ah
COVID-19 weli waxa uu wadamada dibada ka yahay mid aan la xakamayn. Tallaabooyinkeena xadku weli waa diyaar si loo yareeyo khatarta COVID-19 ee ka imanaysa wadamada dibada.
Dadka soo gelaya New Zealand waa inay tagaan xarunta karintiimada ilaa ka reebitaan laga siiyo. Haddii ka reebitaan la siiyo weli waa inay is karantiimeeyaan.
Shaqaalaha karantiimada la maareeyo iyo xarumaha karantiimada, iyo doorarka aadka u khatarta sareeya xaga xadka si caadi ah ayaa looga baadhaa COVID-19.